Al-Qaacida oo si KMG ah u magacowdey hogaamiyaha badalaya Cusaama Bin Ladin – SBC
Al-Qaacida oo si KMG ah u magacowdey hogaamiyaha badalaya Cusaama Bin Ladin
Shabakada Al-Qaacida ee la dagaalanta Mareykanka & xulufadiisa ayaa goor dhaweyd shaaca ka qaaday magaca hogaamiyaha si ku meel gaar ah u badalaya Cusaama Bin Ladin oo horaantii bishan ay ku dileen ciidamada Navy Seals ee Mareykanka wadanka Pakistan.
Saif al-Adel oo ah hogaamiye u dhashay dalka Masar ayaa la sheegay in uu noqonayo hogaamiyaha KMG ah ee Al-Qaacida iyadoo ay u muuqanayso in uu ka hormarey Ayman al-Zawahri oo la aaminsanaa in uu yahay ninka ugu haboon ee badalaya Cusaama Bin Ladin maadama uu ahaa ku xigeenkiisii.
Warar aan si buuxda loo xaqiijin oo laga helay ilo ku dhaw Al-Qaacida ayaa lagu sheegay in Saif aanu ahaan doonin hogaamiye rasmi ah balse oo si ku meel gaar ah madax uga noqon doono hawlgalada Al-Qaacida.
Warbixin uu siidaayey Telefishinka Al-Jazeera ee fadhigiisu yahay wadanka Qadar ayaa lagu sheegay in magacaabista Saif al-Adel ay tahay mid ku meelgaar ah, sidoo kale Mustafa al-Yemeni oo aan la sheegin dhalashadiisa uu hogaamin doono hawlgalada Al-Qaacida, isagoo badalaya Saif al-Adel oo horey booskaasi u joogay.
Xeerbeegtada Mareykanka ayaa ku eedeynaya Saif al-Adel in uu ka mid ahaa hogaamiyeyaasha rasmiga ah ee sida weyn uga qayb qaatey weeraradii qarax ee ka dhacay magaalooyinka Nairobi & Derasalam sanadkii 1998-kii.
Sidoo kale waxay sheegayaan in ninkaasi uu ka aasaasay xerooyin tababar oo lagu tababaro Al-Qaacida wadamada Suudaan & Afgaanistaan.
Halkan ka akhri warbixin SBC shaley ka qortey cidii badali laheyd Cusaama Bin Ladin
Kala soco SBC maalmaha soo socda taariikhda Saif al Adal oo faahfaahsan hadii ALLE idmo.
maxamad cisaman says:
waxaan kaqabaa hadii aan ahay shakhi in uu saxan yahay hogaamiyahaa reer masareed
asc oo ninkaan maba laha astanta shuyuuqta sida garka shekhii garka waynaa ma garmaleeti baa badalay